Ukuphathwa Kwadlezinye kanye noMthetho
Ukudliwa kungenye yezinto ezisongela kakhulu ekusindeni komnotho kwabalimi abasha, abasanda kuvela kanye nabalimi bemfuyo. Lesi esinye sezizathu ezinkulu kakhulu zokuthi kungani abalimi abaningi besuka ekukhiqizeni imfuyo.
Abalimi babhekene nenkinga eyinkimbinkimbi uma kuziwa ekuphathweni kwezilwane: Ngakolunye uhlangothi, banelungelo lomthethosisekelo kanye nomthwalo wemfanelo wokuvikela impahla yabo, okuyilokho okushiwo imfuyo yabo. Ngesikhathi esifanayo, nokho, kubonakala njengabagcini bomhlaba, futhi banomthwalo wemfanelo wokunakekelwa nokuvikela izinhlobo ezihlukahlukene ezihambisana nalokhu.
Ukuze ucindezele izindaba nakakhulu, uhlaka lwezomthetho lokuphathwa nokulawulwa kwezilwane ezidliwayo alucacile futhi kunenqwaba yezwe kazwelonke neyesifundazwe, evame ukuphikisana noma idethi, imithetho kanye nezinqubomgomo ezihluka kwesifundazwe kuya kwesinye. Abakhiqizi bemfuyo enomhlaba owehlula izifundazwe ezahlukene, bangase bangavunyelwe ukusebenzisa uhlobo olufanayo lwezindlela zokulawula ezingxenyeni ezahlukene zepulazi labo.
Indlela engcono kakhulu yokunqoba lokhu okungaqiniseki futhi ukuqinisekisa ukuthi ayiphuli umthetho uma kuthatha izinyathelo zokulungisa, abalimi kufanele bakhe ubudlelwane futhi baxoxe namahhovisi abo eziNdawo Zokugcinwa Kwemvelo noma iPredation Management Forum ukuze uthole iseluleko. Iforamu Management inikeza ukuqeqeshwa okuvamile ukunika abalimi amandla okubambisana ngamathuluzi ukuze baphathe isikhathi eside kakhulu.
Izenzo ezimbili ezibaluleke kakhulu okumele zicatshangelwe ekulawulweni kwesikhathi sokudalwa yiNational Environmental Management Biodiversity Act kanye noMthetho Wokuvikelwa Kwezilwane.
Umthetho weNational Environmental Management Biodiversity Act (uMthetho we-10 ka-2004) uhlose ukuvikela izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo eNingizimu Afrika kanye nemvelo. Ukubulawa nokuzingela kwezinhlobo ezisongelwa noma ezivikelwe ezivunyelwe ngaphandle kwezilwane kubhekwa ngaphandle kokuthi isilwane sibhekwa ngokuqondile njengomonakalo obangela isilwane iziphathimandla.
Isenzo singathathwa kuphela ngemuva kokuba imvume ikhishwe ukuze kuthathwe izinyathelo zokulungisa. Iziphathimandla zikhomba izinyathelo zokulungisa ezivunyelwe nezilwane ezithile ezibhekiswe kuzo kanye nezinyathelo okumele zithathwe uma isilwane sibanjwe-isibonelo, uma isilwane sidinga ukuthuthwa, lapho, nokuthi kufanele kwenziwe kanjani lokhu.
Ngokusekelwe kulo Mthetho, abalimi kufanele basebenzise indlela yokuphatha ephelele yokuvikela imfuyo yabo kusukela ekucaleni nasezinyathelo zokulungisa ezihloselwe ukuvimbela izilwane ezingalindelekile ukuba zingalimazi. Umlimi uvunyelwe ukubulala isilwane esivikelwe ngokuzivikela, kodwa lokhu kufanele kubikwe ngokushesha ngangokunokwenzeka kwiHhovisi lezokulondoloza elifanele, elizophenya ngalolu daba.
Izenzo Zokuphatha Ngokobuntu
Ngokwe-Animal Protection Act (uMthetho 71 ka-1962), akukho ndlela yokulawula ingasetshenziswa ngendlela edala ubuhlungu nokuhlupheka ezilwaneni. Ngakho-ke, abalimi kufanele bahlukane nezinyathelo zokulawula ezingabangela noma yikuphi ukulimala komzimba, njengezigibe, izigibe, amadivaysi omlenze noma ubuthi. Ngaphandle kokuhlukumezeka, lezi zindlela nazo azikhethi futhi zivame ukuthinta izilwane ezingahlosiwe.
Ukusetshenziswa kwezicupho ezithambile kuyimpikiswano, njengoba ingaba yisikhali sokubulala esicubile futhi sidonsa zonke izinhlobo zezilwane lapho kushiywe ngezandla ezingenalwazi. Ubuqili ukubeka isicupho ngendlela kuphela isilwane esilondelene esizobanjwa ngaphandle kokulimala.
Ukusetshenziswa kwezinja zokuzingela kugxiliwe, njengoba lezi zinja zivame ukudala umonakalo ezincelisayo ezincane uma zingakaphethwe kahle. Ngokwe-Animal Protection Act, izinja eziqeqeshwe kuphela zingasetshenziswa futhi zingasetshenziselwa kuphela ukulandelela izilwane. Izinja zingase zingabulali noma zingene ekuziphatheni ngokomzimba nesilwane futhi izinja kufanele zibhekwe kahle.